Telefoonada ugu fiican ee Android: tijaabooyinka, bilaabista, xanta ... | Androidsis (Bogga 29)
3 fure oo lagu doorto mobilada ugu fiican si aad sawirro uga qaaddo
Ma rabtaa mobilka ugu fiican? Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa dalbanaya tayada muuqaalka ugu sarreeya, waxaan kuu sheegi doonnaa astaamaha muuqda ee ay tahay inuu terminal-kaaga fiican yeesho.
BlackBerry Priv wuxuu awoodi doonaa inuu duubo fiidiyowyo ku jira tayada 4K
Faahfaahinta cusub ee BlackBerry Priv waa la sii daayay, kaas oo yeelan doona processor 64-bit ah marka lagu daro u oggolaanshaha fiidiyowyada in lagu duubo tayada 4K.
Nexus 6P vs Nexus 5X: kuwani waa kala duwanaanshahooda
Waxaan kuu soo qaadaneynaa isbarbardhig dhameystiran halka aan ku muujineyno kala duwanaanshaha ugu weyn ee u dhexeeya Nexus 6P iyo Nexus 5X. Waa kee ikhtiyaarka ugu fiican?
Xiaomi waxay soo bandhigi kartaa Mi Note 2 bisha Nofembar
Xiaomi kama daalayo furitaanka terminaal cusub, terminalka xiga ee soo saaraha Shiinaha soo bandhigi karo waa Mi Note 2.
Xiaomi waxaa baaraya dowladda Shiinaha dhaqammada xayeysiinta ee xun
Xiaomi waxaa baaray dowladda Shiinaha jabinta sharciga tartanka xayeysiinta.
Nexus 5X kuma jiraan fiilo uu kumbuyuutarka ugu xiro
Waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah lama filaanka lama filaanka ah ee Nexus 5X waana taas in terminalka cusub ee Google uusan ku jirin fiilo uu kumbuyuutarka ugu xiro.
INNJOO ONE 4G Dib u eegis iyo Falanqeyn
Maanta waxaannu kaaga tagnay dib-u-eegidgan iyo falanqaynta dhammaystiran ee 'INNJOO ONE 4G', oo ah terminaal u muuqda dhammaadkiisa xiisaha iyo xaragada leh.
Xanta ku saabsan OnePlus Mini ayaa xoog kusoo laabaneysa, kuwani ma waxay noqon doonaan astaamaheeda farsamo?
Noocyo farsamooyin taxane ah ayaa la soo daadiyay oo ka tirsanaan kara OnePlus Mini, telefoonka cusub ee dhexdhexaadka ah ee 'OnePlus'
Xiaomi wuxuu damacsan yahay inuu iibiyo 10 milyan Xiaomi Redmi Note 2 ka hor dhamaadka sanadka
Maamulaha guud ee shirkadda Xiaomi ayaa ku dhawaaqay in shirkaddu ay higsaneyso inay gaarto 10 milyan oo unug oo laga iibiyay Xiaomi Redmi Note 2
Kaamiradda Xperia Z5 ayaa ugu fiican xilligan
In kasta oo ay tahay qadarin ka timid tijaabooyin taxane ah oo ka yimid Dxomark, waa guux guud oo ah in kamaradda Xperia Z5 ay tahay tan ugu fiican hadda mobilada.
Dib u eegista Xiaomi Redmi Note2. Xiaomi ayaa markale sameysay, terminal weyn oo kayar 200 euro
Falanqeyntan dhameystiran iyo fiidiyowga fiidiyowga ee Xiaomi Redmi Note2 waxaan ku tusineynaa sida ay suurtogal u tahay in la xidho terminaal weyn oo keliya 150 euro.
Xiaomi Mi5 wuxuu bixin doonaa akhristaha sawirka faraha ee Qualcomm
Xiaomi-ka xiga ee Xiaomi, Xiaomi Mi5 wuxuu ku darayaa tikniyoolajiyad cusub aaladda sawirka faraha ee ay soo saartay shirkadda Qualcomm.
Nexus 6P wuxuu imaan doonaa Spain laga bilaabo Nofeembar
Nexus 6P oo la iibinayo bartamihii Nofeembar, tan waxaa ku xaqiijisay shirkadda Huawei barteeda rasmiga ah ee Isbaanishka Twitter-ka.
Google waxay u timid inay ka jawaabto su'aalo taxane ah oo ku saabsan Nexus cusub
Google wuxuu aadayaa Reddit si uu uga jawaabo su'aalaha ku saabsan caddadka xulashada qalabka ee labada Nexus cusub
LG wuxuu ku dhawaaqay V10, oo ah taleefan casri ah oo laba-shaashad leh oo cusub oo loogu talagalay gaar ahaan waxyaabaha ku jira maadooyinka badan
LG V10 wuxuu leeyahay shaashad labaad oo loo isticmaalo in lagu haysto markasta sidaasna lagu helo ogeysiisyo, fariimo iyo waxyaabo kale oo badan.
LG wuxuu soo bandhigayaa jiilka labaad ee Watch Urbane oo leh LTE isku xirnaanta
Jiilka labaad ee LG Watch Urbane wuxuu kuu ogolaanayaa inaad wicitaano sameyso oo aad noqoto smartwatch gebi ahaanba ka madax banaan casriga.
OnePlus X, wuxuu imaan lahaa Oktoobar
OnePlus ayaa qorsheyneysa inay soo saarto qalab cusub ka hor dhamaadka sanadka. Magaceedu waa OnePlus X oo wuxuu imaan doonaa Oktoobar soo socota.
Fiidiyowga cajiibka ah ee 240fps ee ka socda Nexus 6P
Fiidiyoow cajiib ah oo lagu duubay 240 fps (dhaqdhaqaaq gaabis ah) oo ah Nexus 6P cusub ayaa la daabacay.
Sawirada sifeerka ah ee labada aaladood ee cusub ee Bluboo diyaarinayso, Bluboo X500 iyo Bluboo X500 Pro, waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta
Maanta waxaan kuu soo bandhigeynaa si gaar ah sawirradii ugu horreeyay ee la sifeeyo ee Bluboo X500 iyo Bluboo X500 Pro.